Hargeysa: Muwaadiniin cabasho ka muujiyay dhul ay lahaayeen oo dawladdu si badheedh ah uga qaadday | Berberanews.com
Home WARARKA Hargeysa: Muwaadiniin cabasho ka muujiyay dhul ay lahaayeen oo dawladdu si badheedh...
Hargeysa: Muwaadiniin cabasho ka muujiyay dhul ay lahaayeen oo dawladdu si badheedh ah uga qaadday
Hargeysa(Berberanews):- Soddon Muwaaddin oo reer Somaliland ah, ayaa cabasho ka muujiyey Dhul ay lahaayeen oo ay sheegeen inay dawladdu si badheedh ah uga qaadday. Dhulkaas ayey sheegeen Xubnahani inay maalgeliyaan oo ay Dugsiyo waxbarasho, Cusbitaallo caafimaad iyo Wershado, balse loo sheegay in Madaxtooyo laga dhisayo.
Qoraal ay ku saxeexan yihiin Xubnaha Guddiga Mulkiilayaashaas oo dalka gudisiisa iyo waddamada dibeddaba kala jooga, ayey ku muujiyeen cabashadooda iyo siday uga xun yihiin waxa ku dhacay, isla markaana waxay Madaxweynaha Somaliland ka codsadeen inuu dhulkooda u soo celiyo, kana joojiyo dayrka iyo dhismaha laga bilaabay Baloodhadoodaas.
Shaxda Qaraalka ay ku saxeexan yihiin xubnahan, isla markaana ku qoran yihiin muwaaddin kasta oo dhul ku leh magiciisa oo saddexan, tirada baloodhada uu ku leeyahay iyo dalka uu deggan yahay oo Warbaahinta ay Guddigu soo gaadhsiiyeen caawa, kuna taariikhaysnaa taariikhda toddoba bisha 1-aad 2019-ka, ayaa u dhignaa sidatan:-
“KU: Madaxweynaha Jamahuuriyadda Somaliland – Mudane: Muuse Biixi Cabdi
Ujeeddo: Cabasho: Dhul dawladdu ka qaadday Muwaadiniin – Mudane Madaxweyne;
‘Annagoo ah muwaaddiniin u badan qurba-joog oo reer Somaliland ah, waxaan ka cabanaynaa dhul aan kulleenahay Degmada Ibraahin Kood-buur/guul Allaah. Waxaan ku war helnay dawladda oo ku wareejisay Ciidan iyo dhisme dayr, taas oo haba-yaraatee wax ogeysiin ah oo lanaga talo-geliyay dhulkagayagaa dhismihu ka socdo aanay jirin illaa manta oo laga joogo sagaal bilood ugu yaraan.
Haddaba, Madaxweyne, waxaan kuu sheegaynaa dhulkani inaanu ahayn mid laysku haytso oo wax khilaaf ahi ka taaganyahay ama aanu ahayn dhul dan guud oo dawladdu leedahay, laakiin uu yahay dhul sharciyaddiisu dhammaystiran tahay.
Annaga oo xeerinayna sharafta dawladnimo, amniga iyo kala dambaynta Qaranka, ayaan kulan la yeelannay Wasiirka arrimaha gudaha, si aan u ogaanno asbaabaha keenay in dhulkayagii dawladdu la wareegto iyo xaaladdan ka taatan Dhulkayaga aannu sharciga u lahayn.
Mudane Madaxweyne jawaabta aannu ka helnay Wasiirka, ayaa waxay noqotay dhulkaa waa laydinkala wareegay oo Madaxtooyaa laga dhisayaa, balse Wasiirku noomuu sheegin meel aannu u raacno hantidayadii haba-yaraatee iyo cid aannu kala xidhiidhno toona.
Annaga oo Madaxweyne ka xun sida wax noogu dhaceen iyo niyad-samida aannu u haynay horumarinta waddankayaga oo kala fog awgeed, ayaa waxaan ku xasuusinaynaa madaxweyne in qorshaha dhulkani ahaa inaannu ka dhisno mashaariic horumarineed sida; Cusbitaallo, Iskuullo, Wershado iyo wixii la mid ah.
Hase-yeeshee, Madaxweyne arrintani waxay na xasuusinaysaa ficilladii ay ku kici jirtay dawladdii hore ee Soomaaliya ee laga xoreeyay dalka, waxaanan u aragnaa caddaalad-darro tii ugu waynayd ee ku dhacda muwaaddiniin Somaliland ah tan iyo intii ay jirtay.
Sidaa daraadeed, Madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa,
Inaad noo soo celiso hantidayadaa aan xaqa u leenahay.
Inaad ka joojiso dhismaha ka socda dhulka, taas oo aan u aragno sharci-darro, kana soo horjeeda xaqa muwaaddinka, bani’aadaminnimada iyo ta Diinta Islaamka.
Madaxweyne waxaan kaa rejaynaynaa inaad xal ka gaadhid dhulkayaga, tixgelin gaar ahna siiso cabashadayada.
Arrintan waxa nagu kalifay inaan Warbaahinta u marinno cabashadayada, waxaannu waynay cid noo geysa Madaxweynaha si aan ugala hadalno arrinta dhulka.
Waxanu u sheegaynaa ummadda Somaliland iyo Dawladda Somalilandba in aanu dhulkani ahayn dhul laysku haysto ama khilaaf ka taaganyahyahay, laakin u yahay dhul sharcigiisii dawlada-hoose dhammaystiranyahay.”
Magacyada Mulkiilayaasha Dhulka leh, siday u kala leeyihiin iyo dalalka ay ku kala nool yihiin;-
Canab Maxamed Odowaa
Maxamed Axmed Hudle
Aadan C/raxman Sh.Mohu’ed
Maxamed Adan Cumar.
Previous articleHaweeney Sacuudiga ka baxsatay oo ku xayiran Bangkok
Next article“Beeshani waxba ma Tabato ee way Talisaa” Madaxweyne Biixi
USA: Xaalad degdega oo la geliyay Gobollada Qaar iyo ciidammada oo heegan ku jira